4- Luka Modric : Markii France Football soo saartay liiska musharixiinta abaal marinta Ballon d’Or, waxaa kaalinta kowaad ku jiray Luka Modric waxaana loo arkayay xidiga ugu cad cad ee abaal marintan ku guulaysan kara kadib markii uu soo hantay abaal marinta xidiga yurub iyo waliba abaal marinta The Best.
Laakiin tan iyo markaas wixii ka danbeeyay waxaa la waayay meel uu maray Luka Modric waxayna xaalada xumi uga bilaabantay kulankii Sevilla ee isla todobaadkii uu ku soo guulaystay abaal marinta The Best wuxuuna tan iyo markaas uu ku soo jiray xaalad murugo badan.
Luka Modric ayaa si buuxda u qirtay in uu daal badan ka dareemayo koobkii aduunka ee uu xulkiisa Croatia la soo gaadhay finalkii koobka aduunka oo uu wax walba u soo huray wuxuuna hadda u muuqdaa mid luminaya fursadii ugu waynayd ee uu ugu guulaysan lahaa Ballon d’Or.
Maadaama oo France Football ay ciyaartoyda ku qiimayso 12 ka bilood ee sanadka waxa ay qabtaan waxa uu Modric waqtiyadii ugu danbaysay lumiyay kaalintii kowaad ee uu ku jiray wuxuuna marayaa kaalinta 3 aad iyada oo ay jiraan laba xidig oo uu markii hore ka fursad fiicnaa oo ka sare maray.
Luka Modric waxa uu door wayn ku lahaa in Lopetegui shaqada Madrid laga caydhiyay maadaama oo uu hoos uga dhacay qaab ciyaareedkii wacnaa ee uu kooxdiisa ku caawinayay waxaana la qabay inta badan ciyaartoyda kooxdiisa, laakiin waxay isaga saamayn xun kaga yeelatay fursadii uu kaalinta kowaad ku ahaa marka la qiimaynayo abaal marinta Ballon D’or.
Iyada oo bisha December 3, ee sanadkan lagu dhawaaqi doono kaalmaha ay galaan dhamaan 30 ka musharax ee abaal marinta Ballon d’Or, haddana saadaasha iyo qiimaynta Ballon d’Or Power Ranking ayaa muujinaysa in Modric uu si wayn hoos ugu dhacay balse uu wali ka mid yahay saddexda xidig ee ugu sarayn kara.